बिजुली चोर्ने को ? कुलमान गएपछि कसरी हवातै बढ्यो विद्युत चुहावट (भिडियोसहित) - Nepali in Australia
April 10, 2021 autherLeaveaComment on बिजुली चोर्ने को ? कुलमान गएपछि कसरी हवातै बढ्यो विद्युत चुहावट (भिडियोसहित)
गर्मी लागेसागै हुकिङ तथा बाइपास गरेर बिद्युत चोरी गर्ने क्रम बढेको छ। खासगरी प्रदेश दुई र वाग्मती प्रदेशमा चुहावट १ प्रतिशतले चुहावट बढेको हो। जनकपुर वितरण केन्द्रअन्तर्गत बारा, पर्सा, सप्तरी र सर्लाहीमा चुहावट बढेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रदेश २ मा एक वर्षअघि चुहावट १५ प्रतिशत थियो । अहिले बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशको चुहावट ७ प्रतिशतबाट बढेर आठ प्रतिशत पुगेको छ । यो प्रदेशमा खासगरी भक्तपुर र ललितपुरमा चुहावट बढेको हो । चोरी बढेको थाहा पाएर पनि प्राधिकरणले प्रभावकारी कदम भने चालेको छैन ।
उसले चुहावट रोकथाममा कोरोना महामारीको बहानाबाजी गरेको छ । जबकि अहिलेको चुहावट कायमै रहे प्रदेश २ मा मात्र प्राधिकरणलाई ७० करोड रुपैयााको क्षति हुन्छ । असारसम्म प्राधिकरणको चुहावट १० दशमलव २८ प्रतिशत थियो । माघ मसान्तमा बढेर ११ दशमलव दुई आठ प्रतिशत पुगेको छ । जबकि चुहावट ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो ।
ट्रान्समिसन लाइन तथा ट्रान्सर्फमर गुणस्तरीय नहुादा पनि चुहावट बढ्छ । प्राधिकरणले अहिले ट्रान्समिसन लाइन र ट्रान्सर्फर फेर्ने काम गरिरहेको छ । स्मार्ट मिटर जडानलाई तिब्रता दिए त्यसले चुहावट रोकथाममा सहयोग पुग्ने जानकारहरुको भनाइ छ
अर्कै संग रंगे हात समातिदा पनि श्रीमानले घर फर्केउ भने तर श्रीमतीले उल्टै थर्काइन जानै मा-निनन।
गाउँमा अछुत भनेर हेपिएकी बिष्णुमाया अमेरिकामा मेयरकी सल्लाहकारसम्म, अब विष्णुमायाका बारेमा विश्वव्यापी पढाइ हुँदै